कथा : भार
आश्विन ११, २०७६ सुबिन भट्टराई
एक अर्धपठित ग्राम युवक, आफ्नो सपनाको दौड गाउँको सुष्कता र सुस्ततामा पूरा नहुने देखेपछि अन्ततः सहरको रेलोपेलोमा अवतरित हुन आइपुग्छु  । भरखर थामिएको वर्षापश्चात् देखिएको स्निग्ध, निरभ्र आकाशमुन्तिर हिलैहिलो बाटो छ  ।
बाटोबाट हिलोका केही छिटाहरूलाई एक जोडी चप्पलको एककोहोरो भट्याकभट्याकले कालो पाइन्टमा निरन्तरसित टिकटिक दाग बनाइदिरहेको छ ।
एकै दिनमा देखिएको दुई भिन्न परिदृश्यको पार्थक्यलाई म मनमा पाइतालासँगै चलाइरहेको छु । गाउँ गोठमा बाँधिएको भैँसीजस्तै लाचार देखेर आएको म सहर उन्मुक्त घोडाजस्तो गतिवान्, बेगवान् देख्न थाल्छु । बिरानो गाउँलाई केही समयका लागि विस्मृतिको शून्यमा लोप गराउँदै सहरमा सुखको सिरानीमा शिर अड्याएर केही सपना सँगाल्न चाहन्छु ।
एउटा झोला मेरो ढाडमा बुई चढेको छ । झोलामा केही थान कपडा, एक थान ब्रस, एक थान टुथपेस्ट र एउटा पुस्तक छ । झोलाभन्दा त आँखा धेरै भरिएको छ, असीम सपनाले । उमेरसित छ असीमित ऊर्जा । इच्छामा घुलेको छ यही उन्मुक्त घोडाझैँ रफ्तार ।
यही सब लिएर म एक आफन्तकहाँ जान्छु । यो एउटा निमन्त्रण थियो । लामै समय अघि मद्वारा गरिएको एक याचनाको प्रतिफल । सहरमा सहरसित सहरकै भएर बस्ने एउटा पुरानो रहर ।
मेरो आगमन र भ्रमणको उद्देश्य सुनेपश्चात् उनी एउटा मध्यमस्तरको उत्साह देखाउँछन् । उनको मध्यमस्तरको उत्साहलाई निम्नस्तरको मेरो दिमागले उच्चस्तरको अनुकम्पा सम्झन्छ र हरक्षण हरशब्द, वाक्य, वाक्यांश, हरहाँसो, प्रतिक्रिया, भावभङ्गी, श्वासप्रश्वास, हरउठाइ बसाइमा कृतकृत्य हुँदै, आफूलाई अझ बढी लाचार ठान्दै उनलाई अझ होनहार ठानिदिन्छ ।
किनकि म सचेत छु कि स्वाभिमानले सपनालाई आँखासम्म पनि नतरोस् ।
केही दिनका लागि म शरणार्थी । दुई छाक खाना र दुई कप चिया अनि एक मीठो निद्रा यहाँ निःशुल्क उपलब्ध छन् । गाउँबाट रहरका घडा टिलपिल भरेर आएको म निद्रा मात्रैलाई अञ्जुलीभरि उठाउन सक्तिनँ ।
‘लौ हिँड अब मसित,’ आफन्त अर्को दिन मलाई भन्छन्, ‘तिमीलाई बाटो देखाउँछु ।’
आखिर सपनाको गाउँसम्म पुग्नलाई पनि त निद्राको बाटो हिँड्नैपर्छ, सफलताको गाउँ पुग्नलाई संघर्षको बाटो हिँडेजस्तै । प्राप्तिको गाउँ पुग्नलाई प्रयासको बाटो नापेजस्तै ।
म निस्किएँ लुरुलुरु, उनको पछि, चप्पल फट्याकफट्याक गर्दै, उनले छाडेको पदछापमा आफ्नो पाइतालाको डोब मिलाउँदै । उनी चार कदम अघि छन् । म कुदेर पनि उनलाई भेट्न सक्तिनँ । समानान्तर हिँड्नलाई नाता, सम्बन्ध, जरा, विगत, आगत (जो अनिश्चित छ) ले आपत्ति नजनाए पनि वर्तमान र त्यसभित्रको यथार्थले अनुमति दिँदैन ।
आज हिलो सुकेर धूलो भइसकेको छ । पाइन्टमा टिकटिक दागहरू बस्न पाउँदैनन् ।
सहर मलाई हरहर बास्ना आउँछ । यहाँको व्यस्तता, कोलाहल, कम्पन, विविधता, भीड नजाने किन मेरा अभीप्सालाई एक फड्को माथि उचाल्दिन्छन् । मेरो दृढतालाई कसिलो बाँधिदिन्छन् । यहाँ अल्मलिने तत्त्वहरू धेरै छन् । सहरको छोटो बसाइ र गाउँको लामो बसाइबीचमा मैले आफू सधैँ सहरतिरै सम्मोहित भएको पाएको छु । गाउँमा मेरा लागि केही छैन । एउटा झिँझोलाग्दो फुर्सद, पट्यारलाग्दो दिनचर्या र सन्नाटामा विलय हुँदै गइरहेको ढुकढुकीबाहेक ।
त्यसै दिन मैले जागिर पाएँ । उनले लगिदिएको परिचितले उनकै भनाइ राख्दै मप्रति विश्वस्त र आश्वस्त भएको जिकिर गरे ।
यो सहरले गरेको पहिलो स्वागतका लागि म सहरसित कृतज्ञ रहेँ । सहरलाई मैले उहिल्यै आँखाभरि टिपेर मनमा सजाइसकेको थिएँ । सहरले मलाई यतिखेर अपनायो ।
‘डेरा नपाउन्जेल मकहीँ बस्नू । मैले दुई तीन ठाउँमा कुरा गर्द्या छु,’ बेलुकी उनले मलाई भने । बडो विनीत र धन्य भावले मैले उनको निर्णयलाई शिरोधार्य गरेँ । एउटा पराश्रित आगन्तुक, जो उनकै गुनको भारीले साससमेत अड्काएर, आँखासमेत उचाल्न नसकेर, वाक्यसमेत नफुटेर थचक्क थिचिएको छ, उसले नतमस्तक हुनुभन्दा बढ्ता के जानोस् ?
सम्भवतः उनले मभित्र लुकेर, नदेखिएका, अल्झिएका भावहरू पढ्न नसकेर भने, ‘चित्त बुझेन ? बोल्दैनौ त ?’
अघिपछिको डोरीजस्तो मेरो बोली यति बेला धागोजस्तै पातलिन्छ । म भन्छु, ‘होइन बुझेको छ ।’ यसो भनिरहँदा मेरो अनुहारमा स्वाभाविक ढंगका साथ आउनुपर्ने हाँसो स्थितिको भारले सिर्जित पासोमा अड्किन्छ ।
दुई चार, पाँच, दस गर्दै करिब पन्ध्र दिनपछि एउटा कोठाको टुङ्गो लाग्छ । खाटदेखि डस्ना, सिरकदेखि, तकिया, भाँडाकुँडा सबै उनले व्यवस्था गर्दिन्छन् र भन्छन्, ‘अरू केही चाहिए भन्नू ।’
यत्रो दिइसकेपछि म अरू के मागौँ ? हुन त माग्दै माग्दै उनीसम्म पुगेको थिएँ । तर अब कति मागूँ योभन्दा ? उनले दिएका हरएक चीजले थिचिएको छु । अझै कति थिचिऊँ ?
उनलाई कहिलेकाहीं मेरो कोठामा आउन मन लाग्छ । मलाई बडो अप्ठ्यारो लाग्छ । उनको स्वागत पनि ठीकसित गर्न नसक्ने हुँ कि भन्ने लाग्छ ।
मेरो कोठामा आएको परिवर्तन देखेर मलाई सोध्छन्, ‘ए सिलिन्डर पनि जोडेछौ त ।’
म मुस्कुराउँदै कपाल कन्याउँछु र एक कप चिया बनाएर ख्वाउँछु । उनलाई पिलाएको त्यो एक कप तातो चियाले मलाई शीतल बनाउँछ ।
अर्कोचोटि आउँछन् । कोठामा आँखा डुलाएर हेर्छन् र भन्छन्, ‘ए, सोफा पनि हालेछौ ।’
म जवाफ दिन्छु, ‘मान्छे आउँदा बस्नै ठाँवै भएन ।’
अनि नास्ता, चिया बनाएर ख्वाउँछु । अलिकति तृप्ति मिल्छ ।
महिनौंपछि उनी आउँछन् आफ्नी श्रीमतीसाथ । खाना खान मैले नै निम्तो गरेको । डेरा फेरेँ योपटक । दुईवटा कोठा र भान्सा । एउटा आफ्नै बेडरुम, अर्को बैठककोठा ।
उनीहरूलाई बैठककोठामा बसाउँछु । भित्तामा एलईडीको सेट छ ।
‘तिमीले प्रगति गरेको देखेर खुसी लाग्छ,’ उनी भन्छन् । म खुसी हुँदै भन्छु, ‘हजुर । भरखर त बामे सर्दै छु ।’
कहिले उनी मलाई आफ्नो अफिस बोलाउँछन् र कुनै क्याफेतिर लैजान्छन् । अनि सुनाउँछन् आफ्नो घर व्यवहार आदिका कुराहरू । छोराको अटेरीपना, छोरीको जिद्दीपना, श्रीमतीको अल्छीपना । म सुनिदिन्छु, हरएक कुरा रोचक कहानीझैँ । उनीसितको संगत भएदेखि म सुन्नमा पारंगत भएको छु ।
कहिलेकाहीँ म उनको घरै जान्छु । अस्तिको शनिबार जाँदा उनी बरन्डामा बसेर कञ्चटका सेता केशहरू बडो ध्यान दिएर उखेलिरहेका थिए ।
मलाई देख्नेबित्तिकै उनले आफ्नो कामलाई बन्द गरे र भित्रपट्टि लगेर बसाए ।
‘के छ गाउँतिरको खबर ?’ सोधे ।
‘अब घडेरी किन्नुपर्‍यो एउटा,’ मैले गाउँतिरको खबर बताइसकेपछि उनले यो प्रस्ताव राखे ।
‘मैले किनेकोतिर किन्ने हो भने खोजिदिन्छु । अलिक महँगोचाहिँ छ ।’ मैले ‘खोजिदिनुस् न’ भनेपछि उनले यसो भने ।
अनि बिदावारी भइवरी निस्कने बेला उनैले अर्को प्रस्ताव राखे, ‘अर्को शनिबार के छ ? ट्राउट खान जाने हो ककनी ?’
मैले आफूलाई फुर्सद भएको बताउँदै उनको प्रस्तावमाथि विमतिको लेशमात्र प्रभाव पर्न नदिईकन स्विकारिदिएँ । उनको साथ पहिलेजस्तो भारी लाग्न छाडिसकेको थियो । उनको अघिल्तिर पर्दा थिचिएजस्तो महसुस हुन छाडिसकेको थियो । सम्बन्धको अनुहार फेरिइसकेको थियो । उनले मलाई बाँधेका गुन र सहायताका धागाहरू बिस्तारै मक्किँदै गइरहेका थिए र अर्को धागोले हामी बाँधिँदो थियौँ । आत्मीयता, समवयी र मैत्रिक भावसहितको धागोले । नभए उही पुरानै भावसहित यो सम्बन्धलाई बोकेर हिँडाऊँ या हुर्काऊँ, यात्रा निकै कष्टकर हुँदो हो । उनी के सोच्थे म जान्दिनँ । तर कमसेकम म उनको सोचाइबाट केही सोच्न सक्थेँ । यही कि उनी आफैँले जुन व्यवहार र अनुकम्पाले मलाई बाँधेका थिए, त्यसबाट बिस्तारै मुक्त हुन चाहन्छन् र मुक्त गराउन चाहन्छन् मलाई । नभए सम्बन्धका अरू आयामहरू खोज्दै उनी मसित किन नजिकिन खोज्थे ?
जिन्दगीको किताबमा सबै पन्नाहरू उस्तै रुचिकर हुँदैनन् । र सबै पन्ना पट्याइलाग्दा पनि हुँदैनन् । उनले सम्भवतः ममाथि एउटा रुचिकर अध्याय फेला पारे । एउटा पठनीय र स्मृतियोग्य दर्शन फेला पारे ।
शनिबारको ककनी भ्रमणले सम्बन्धमा केही रङहरू थपिन्छन् । त्यो पुरानो धागो झनै मक्किन्छ । करीब–करीब चुँडिने अवस्थामा पुग्छ । आत्मीयताको एउटा रेखा कोरिन्छ । सामीप्यको सिमाना फेरिन्छ ।
कमसेकम म यो ठान्छु ।
‘लौ कहाँ हो तिमी, तुरुन्त आउनुपर्‍यो,’ एकबिहानै फोनमा उनको बोली सुनिसकेपछि म नुहाइधुवाइ पनि नगरी हस्याङफस्याङ गर्दै उनकहाँ गएँ । केही अनिष्ट र भवितव्यको दुःखद परिकल्पनाले आफलिँदै ।
तर उनको घर पुगिसकेपछि उनले भने, ‘आज तिमी र म जग्गा हेर्न जाने ।’
उनको आग्रहलाई टाल्ने कुरो थिएन । गएँ । करिब पैँतालीस मिनेट मोटरसाइकल यात्रा गरिसकेपश्चात् पुगिएको ठाउँमा उनले जग्गा देखाए । जग्गा राम्रो भए तापनि त्यसलाई पर्ने मूल्यका लागि म तयार थिइनँ । तर यो कुरा स्पष्ट पनि भन्न सकिनँ । भनौँ, थिचिनु के हो भन्ने कुराले गर्ने अप्ठ्यारा यी र यस्तै परिस्थितिहरूमा स्पष्ट हुन्थ्यो ।
उनले मेरो दोधारे र अस्पष्ट कुराहरूको अनुमान सम्भवतः गर्न सके होलान्, किनकि लगत्तै उनले यो पनि भने कि बैना दिएर केही महिनाका लागि कागज गर्न सकिन्छ । नपुगेका खण्डमा आफैँले हाल्दिनेसम्मका कुरा पनि गरे । मलाई मान्न कर लाग्यो ।
‘कोही प्रेमिका छ ?’ अर्कोपटकको भेटमा उनले सोधेका थिए । मैले भएर पनि ‘छैन,’ भनेँ । एक दुई चरण आँखा जुधेपछि मेरो सपनामा आफ्नो पनि सपना मिसाउन कोही भरखर आएकी थिई । अरूलाई बताइहाल्ने स्थितिमा सम्बन्ध पुगेको थिएन । त्यसमाथि उनको प्रश्न ‘कोही प्रेमिका छ ?’ को महत्त्व कुन हदसम्म थियो बुझ्न सक्ने सामर्थ्य मेरो थिएन ।
‘लौ ठीक छ उसोभा,’ उनले भने, ‘मेरी साली छ । जोडा मिल्छ । कुरा चलाऊँ ?’
यो अर्थमा रहेछ । यस अर्थमा हुँदो हो त नभए पनि छ भन्दो हुँ । तर सकिनँ ।
जवाफमा भनेँ, ‘कुनै दिन ।’
उनी मेरो जवाफको ‘कुनै दिन’ लाई पटक–पटक हेर्न, खोज्न चाहिरहेँ । लामो समयसम्म कुरे । तर म उनीसितको भेटदेखि तर्किरहेँ ।
फोन आइरहन्थ्यो । कहिले भन्थेँ, ‘आज म सहरभन्दा पर छु ।’
कहिले भन्थेँ, ‘आज अलिक सञ्च छैन ।’
‘एक दुई दिनमा भेट्छु ।’
‘आज गाउँबाट पाहुना आएका छन् ।’
कहिले फोनै उठाउन्न थिएँ । हुँदाहुँदा अन्तिममा मोबाइलको सिमकार्ड नै फालिदिएँ । जग्गाको बैनाका लागि दिएको रु. दस हजार पनि माया मारिदिएँ । र डेरा सरेँ ।
गाउँबाट एक थान सपना बसको बुई चढेर फेरि सहर ओर्लिन्छ । पाइताला कतै, कुनै आफन्तकातिर सोझिन्छ । र, योपटक त्यो आफन्त म हुन पुग्छु ।
यो पनि प्रगतिकै संकेत हुँदो हो । कसैले सहयोग माग्ने कोटीको हुनु सानो कुरा हो र ?
ढकढकिएको ढोका उघार्न जाँदा म मेरो पुरानो साथी (उमेरले चाहिँ भाइ) फेला पार्छु । उसको उपस्थितिसितै उपस्थित हुन आइपुग्छन्, ऊसित बितेका मेरा ग्राम साहचर्य र सामीप्यका आभासहरू । फाउन्टेन पेन झट्कार्दा एक धर्सो मसी पोखिएजस्तै पोखिन्छन् मस्तिष्तकमा बाल स्मृतिका केही रहलपहल अवशेषहरू ।
एउटा निरीह मुस्कानका साथ ऊ भित्र पस्छ । ऊ पनि उही गाउँको रफ्तारसित आफ्नो रफ्तार मिलाउन नसकेको आरोप गाउँलाई लगाएर आएको छ । केही आश्रय, केही बाटो, केही दिग्दर्शनको अपेक्षासहित ।
ऊ किञ्चित आश्वासित हुन्छ । कमसेकम म यो महसुस गर्छु । झोला बिसाए पनि आँखाबाट संकोच बिसाउन सकेको छैन । उकाल्न सकेको छैन हृदयमा निर्धक्क हुनुको भाव । आस गरे पनि थोरै ढुक्कले फेर्न सकेको छैन सास । यद्यपि मबाट अतिथि परायण भाव स्वतःस्फूर्त रूपमा अविच्छिन्न निःसृत भइरहेको छ ।
मलाई ऐना हेरेजस्तै अनुभूति भइरहेछ । ऊ आयो, तर आफैँलाई भन्दा पनि मलाई बढी लिएर आयो । म, जो आउँदा आउँदै कतै छुटेको थिएँ । म, जो आउँदाआउँदै, थोरै आइपुगेको थिएँ ।
मैलो कमिज, जिङ्रिंग कपाल, क्रिजको मुखै नदेखेको पाइन्ट । अनि ऊ आफ्नो गन्धमा सिँगो गाउँ बोकेर आएको छ ।
बडो अप्ठ्यारोसित बस्छ मानौं ऊ ठान्छ बस्दा कुर्सीलाई पनि दुख्छ । बडो जतन गरेर हिँड्छ, मानौँ ऊ हिँड्दा भुइँको छाती छियाछिया हुन्छ । बडो सुस्तरी बोल्छ, मानौँ ऊ बोल्दा हावालाई धक्का पुग्छ ।
‘एकदुई दिन पर्ख है,’ उसको व्यक्तित्वमा लागेको संकोचको कुहिरो फाटोस् भन्ने अभिप्रायले म झलमल्ल उज्यालिँदै बोल्छु, ‘म केही उपाय गर्छु ।’
कुहिरो फाट्दैन ।
उपायहरूको खोजी म गर्छु । फेला पर्छ कुनै कुनोबाट उपायको एक धर्को प्रकाश चियाइरहेको । म पछ्याउँछु त्यसलाई । त्यो सजिलै वशीभूत हुन्छ । सहर बसेर यति शक्ति मैले पनि सञ्चय गर्न सकेको रैछु । आत्मश्लाघाले गद्गद् भएँ ।
ऊ आएदेखि मैले छर्न खोजेको उज्यालो बल्ल उसको मुहारमा टल्कियो ।
मैले भनेँ, ‘मसँगै बस्दा हुन्छ ।’
उसले भन्यो, ‘होइन, कति दुःख दिऊँ ।’
काम पाइसकेपछि ऊ गयो । दोस्रोपटक भनिनँ । ऊ जाँदै गर्दा मैले देखेँ, ऊसँगसँगै मसित साक्षात्कार भइरहेको, उठबस गरिरहने, झस्काइरहने, केही सम्झाइरहने मेरै केही अंश पनि लिएर गयो । ऊ गएदेखि मैले मेरो आफ्नो त्यो अनुहारलाई खोज्न छाडिदिएँ । उसको नयाँ डेरालाई तुरुन्त चाहिने आवश्यक चीजहरू मैले उपलब्ध गराएँ । ऊ ‘भइगो, पर्दैन, के को दुःख’ जस्ता औपचारिकता निर्वाह गरिरहेको थियो । मैले ‘यसमा के को दुःख र ?’ भन्दै व्यावहारिकताको दियो बालिरहेको थिएँ ।
भेटहरू भइरहन्छन् । ऊ आउँछ भेट्न कहिलेकाहीं । म पनि जान्छु, उसले बसाएको ठाउँ हेर्न । उसको सत्कार, आदर, आतिथ्य अनि धन्य हुनुको भावले ऊ मसित प्रस्तुत भइरहन्छ । लाग्छ यो सहरमा ऊसका लागि मभन्दा महत्त्वपूर्ण अर्थोक केही छैन, कोही छैन ।
कोठामा दूध सकिएको छ भने हस्याङफस्याङ गर्दै दौडिन्छ । यो किसिमको आदरले मलाई पनि उसले गलाएको छ ।
‘कहाँ छौ, आज आऊ न यहाँ ।’ कहिलेकाहीं फोन गरेर कोठामै बोलाउँछु उसलाई । ऊ एक घण्टामै आइपुग्छ । अनि म बोतल उघार्छु । तर ऊ उस्तो उघ्रिन सकेको छैन ।
मैले भनेँ भने रातै मकहाँ बिताउँछ ।
एक दिन उसले पनि मलाई बोलायो । पिउने उद्देश्यले । पच्चीस थोक सितनका साथ । उसको आतिथ्य देखेर म त्रसित भएको थिएँ । मलाई रक्सी चढ्थ्यो । ऊ मलाई चढाउँथ्यो । म कति महान् छु ! उसको मुखबाट सुनिसकेपछि गद्गद् हुन्छु । आफ्नो महानता मातेको शरीरसँगै घरमा ल्याउँछु र झन् पुल्पुल्याउँछु ।
मलाई ऊसित भेटिरहन मन पर्छ । नभए यहाँ, यो स्वार्थी सहरमा मलाई महान् कसले भन्छ ? आफ्नो महानताको गुणगान सुन्न पाउँदा निद्रा मीठो लाग्छ । आफ्नो औचित्यको अन्तःदर्शन हुन्छ । एक दिनको प्रशंसाले दस दिन दौडाउँछ । अनि फेरि रित्तिन्छु ।
एकपटक दसैँमा गाउँ जाँदा सँगसँगै गयौँ । ऊ मेरो गाउँको घरमा पनि आइरहन्थ्यो । ऊ गाउँमा समेत मसित गाउँकै पुरानो रूपमा फर्केर भेट्न सकेन । बरु हाम्रा साझा मित्रहरू भेट हुँदा अरूहरूबीच पुरानैजस्तो सम्बन्ध ब्युँझियो । तर ऊसितको पुरानो सम्बन्ध मरिसकेको थियो । उसले ती पुराना साथीहरूमाझ मेरो महानताको गुणगान गाइरह्यो ।
हाम्रो सम्बन्ध पनि सहरजस्तै भएको देखेर पुराना साथीहरू जिल्लिए ।
एकपटक नमज्जाले बिरामी परेँ । ज्वरो घट्नै मानेन । एन्टिबायोटिक्सको डोजले पनि छोएन । डाक्टरले अस्पताल भर्ना भएर सलाइनबाट एन्टिबायोटिक्स चढाउने बताए । मैले बिरामी कुरुवाको रूपमा उसैलाई रोजेँ । ऊ मैले इच्छाएबमोजिम अस्पतालमा अफिस बिदा लिएरै मलाई रुँगेर बस्यो ।
‘मैले दुःख दिएँ है ?’ योपटक मैले औपचारिकता निर्वाह गरेँ ।
‘केको दुःख र, यति जाबोलाई,’ ऊसले व्यावहारिकताको दियो बाल्यो । अनि एकपटक फेरि मेरो महानताको गुणगान गायो । मैले उसलाई गरेको सहयोग उल्लेख गर्न बिर्सेन । म अस्पतालको शय्यामा समेत मखलेल भइरहेँ ।
बाटोमा हिँड्दाहिँड्दै ऊसित जम्काभेट हुन्छ । ऊ एउटी केटीसित हुन्छ । छिनमै उसको अनुहारको रोगनले कोल्टे फेर्छ । उन्मुक्त हाँसो, किञ्चित लाज र निर्धक्कसित हिँडिरहेको ऊ मलाई देख्नासाथ सतर्क हुँदै बडो अदब राख्दै सम्हालिन्छ र ती युवतीलाई मेरो परिचय गराइदिन्छ ‘म कुरा गरिराख्थेँ नि, उहाँ नै हो... ।’
युवतीले नमस्ते गरिन् । नजिकै कुनै क्याफेमा तीनै जना गयौँ । मेरै आग्रह थियो ।
यहाँ पनि ऊ सुरु भइहाल्यो । कोही अञ्जान र सुन्दर युवतीका अगाडिसमेत यसरी प्रशंसित हुन पाउँदा मलाई कफीभन्दा पनि प्रशंसा रुचिकर लागिरह्यो । सधैँ दुई जनामा मात्र सीमित प्रशंसाले योपटक अलिक फैलिन पाएको थियो । युवतीले हतार देखाएर मात्रै, नभए अर्को चरणको कफी मगाउन खोज्दै थिएँ म ।
भेटहरू भइरहे । ऊसितको संगतमा म बोल्नमा पारंगत भएको छु । हर एक सानासाना समस्या, प्रगति, उपलब्धि, हैरानी सब ऊ बडो रोचक मानेर सुनिदिन्छ । त्यसैले मलाई उत्प्रेरणा दिन्छ, सुनाइरहने ।
सहरमा अनेकथरीका सम्बन्ध हुन्छन् । कहिल्यै नजोडिने । चाँडै जोडिने । जोडिँदै, तोडिँदै गर्ने । एकचोटि तोडिएपछि कहिल्यै नजोडिने । एक दिन राम्रैसित जोडिएको भन्ठानेको सम्बन्ध नमज्जाले तोडियो । सम्बन्ध प्रेमिकासितको । जो चौथो कोटीको सम्बन्ध थियो ।
त्यस दिन रक्सी मात्रको साथ पर्याप्त हुँदैन भन्नेमा म ढुक्क थिएँ । उसलाई घरमै बोलाउने योजना बनाएँ । रक्सीको रमरम, उसका अघिल्तिर प्रेमिकाको धोकेबाज चरित्रको बयान, अनि ऊबाट सधैँ खाईपाई आएको प्रशंसा र महानताका वाणीहरू । यो हालतमा सबै थोक मिसिएमा पक्कै मल्हमको काम गर्नेछ । यत्तिले रात घटिया नबित्ला । औसतभन्दा अलिकति कम बिते पनि चल्नेवाला थियो ।
ऊ आफू उपलब्ध हुन नसक्ने बताएर फोन राख्यो । प्रेमिकाले मुटुमा बनाइदिएको सुरुङ ऊसको इन्कारले अझै गहिरियो । कतै टाल्न चाहन्थेँ यो ।
एक्लै पिएर सुतेँ ।
भोलिपल्ट उसलाई फोन गरेँ । किनकि पीडा भोलिपल्ट के महिनौंलाई दिएर गएकी थिई । मेरो पौरुष अहम्लाई क्षत–विक्षत तुल्याएर गएकी थिई ।
भोलिपल्ट पनि ऊ उपलब्ध हुन सकेन । विकल्पहरू नभएका होइनन् । अफिसका साथीहरू थिए । तर अफिसकै सहकर्मीसित परेको गुपचुप प्रेम उनीहरूका सामु ओकल्ने कुरा थिएन । यता केही दिनदेखि उसको फोन अफ थियो ।
एक दिन उसकै डेरामा गएँ । ऊ डेरा सरिसकेको रैछ । फोन गरेँ, अफ नै थियो । यताउता सम्पर्क सूत्र फेला पारेर खोजेँ पनि । अफिसै फेरिसकेको थियो । अब उसलाई खोज्नुको कुनै तुक थिएन । किनकि ऊ हराएको थिएन, भागेको थियो ।
स्मृतिको यानमा चढेर आफ्नो विगतमा गएँ । घटनाहरूको तादात्म्यता मिलाउन खोज्दा, मेरो चेतनाको पातलो पर्दा हलुकोसित फरफरायो । एउटा सम्बन्ध जसको बोझ थाम्न नसकेर मैले जे गरेको थिएँ, उसले पनि ऐजन गरेको देखियो । नदेखे पनि, देखासिकीझैँ देखिने गरी ।
महान् हुनुको सुन्दरता पनि एउटा उचाइसम्म मात्र सुहाउँदोरैछ । त्यो धेरै उच्च भयो भने, लत्रिन्छ, भाँचिन्छ । चाहिनेभन्दा बढी भयो भने खुकुलो र असुहाउँदिलो लुगा लगाएजस्तो अस्वाभाविक देखिन्छ । अत्यधिक आभूषणले असहुउँदिलो र भद्दा देखिएझैँ देखिने रैछ ।
कसैको पनि धेरै गुनले पोल्छ । विवश तुल्याउँछ । पिँजडाको सुगा बनाउँछ । यो निरंकुश शासकझैँ हुन्छ, जसका अगाडि पर्दा मात्र पनि हामी फत्रक्क हुन्छौँ । म उनको गुनको भार थेग्नै नसकेर, त्यसको रिन तिर्नै नसकेर उनीबाट उम्केको थिएँ । आज ऊ मेरो गुनको भार थेग्न नसकेर, तिर्न नसकेर (नचाहेर हो कि !) मबाट भागेको थियो ।
थाहा छ दुःखी हुनुको कुनै अर्थ छैन तर जीवन यस्तै अर्थहीन कुराहरूको उल्झनमै बढी अल्झिन्छ ।
प्रकाशित : आश्विन ११, २०७६ १०:१८